Mareykanka oo war cusub ka soo saaray xaaladihii ugu dambeyey ee weerarkii saldhigga Manda Bay – Hornafrik Media Network
Mareykanka oo war cusub ka soo saaray xaaladihii ugu dambeyey ee weerarkii saldhigga Manda Bay
Taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa xaqiijiyey in Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigg ku yaalla deegaanka Manda Bay ee gobolka Lamu, kaas oo ay wada deganaayeen ciidamo Mareykan ah iyo kuwo Kenyan ah.
Bayaan ka soo baxay AFRICOM ayaa lagu yiri “Anaga oo la shaqeeneyna saaxiibadeena Kenya, saldhigga ciidamada cirka waa la nadiifiyey, waxaana weli socda hanaan si buuxda loogu sugayo.”
AFRICOM ayaa sheegtay in war-saxaafadeedyo dhowr ah oo Al-Shabaab ay ka soo saartay dhacdadan ay yihiin kuwa lagu buun-buuninayo xaaladda amniga ee saldhigga. “Dhaqankan waa mid caadi u ah ururkan argagixiso.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
“Al-Shabaab waxay doortaan been, cadaadis iyo inay awood u adeegsadaan sare u qaadidda sumcaddooda, si ay u abuuraan warar been abuur ah,” waxaa sidaas yiri agaasimaha howl-gallada AFRICOM Major General William Gayler.
“Waa muhiim in loogu jawaabo Al-Shabaab halka ay taagan yihiin, si looga hor tago faafitaanka kansarkan,” Ayuu yiri Gayelr.
AFRICOM waxay sheegtay in xaaladda amni ee Manda Bay ay tahay mid aan fadhin.
“Al-Shabaab waa urur argagixiso oo aan arxan laheyn. Waa koox ku xiran Al-Qacida oo raadineysa inay dowlad Islaam ah ka aas-aasaan Bariga Afrika, si ay meesha uga saaraan saameynta reer Galbeedka iyo fikradahooda ee gobolka. joogitaanka Mareykanka ee Afrika waa u muhiim dadaallada looga hortagayo aragixisada.” Ayuu hadalkiisa sii raaciyey Gayler.
AFRICOM waxay sheegtay in qiimeyn horudhac ah ay muujineyso inay waxyeelo gaartay qalabkii yaallay saldhigga, isla markaana ay socoto qiimeyn lagu sameynayo shaqaalaha saldhigga.
Weerar lagu dilay dad badan oo ka dhacay dalka Libya.
Baarlamanka Ciraaq oo u codeeyey in ciidamada Mareykanka laga saaro dalka